Kahle akhethiwe ummese enemisebenzi uyakwazi esikhundleni ekhishini izinhlobo ezihlukahlukene amathuluzi akhethekile ukusika. Ngokuvamile bayidayise iminyaka eminingi, ngakho-ke akukho Kunconywa ukuba ngisindise izwe.
Omunye kubo bonke
Imimese ziyingxenye esisemqoka kwanoma iyiphi ikhishi. Yiqiniso, ngaphandle hhayi amathuluzi akhethekile ongakwenza, uma ufuna ukusika ithambo noma usike ukudla eqandisiwe. Kodwa ukwenza imisebenzi elula kungenzeka ukusebenzisa ummese eyodwa yawo wonke izikhathi. Ngokulinganayo babhekana ngokuphumelelayo ukusika izinhlanzi, inyama, imifino eqoshwe, kungaba esikhundleni ngisho ejwayelekile Povarskaya ezintathu.
ummese Universal asikho isidingo babebomuntu brand owaziwa. Ngokuvamile, ummese owenza izandla senkosi, oye atshalwe umkhiqizo wawo lengenako, kude lingadlula emikhiqizweni ukusebenza lemikhiqizo abadumile. Ngakho-ke, kuyafaneleka neze nokujaha imfashini, brand futhi intengo. Into esemqoka ukuthi ummese kwakunjani futhi kulula ukuyisebenzisa.
Izinhlobo imimese jikelele
La mathuluzi Ikhishi kuhluke ngezindlela eziningi. Ngokwesibonelo, mhlawumbe bangamaJuda obuphelele ezahlukene kanye ukuma lomshini bese ikhaba eyenziwe ngobumba, titanium noma insimbi engagqwali. Ukuze womshini isibambo sisetshenziswa njengendebe okusansimbi eliphezulu izinkuni noma plastic.
Kuyancomeka abathengi ukuthola amathuluzi ekhishini eJapane. Ngokwesibonelo, blade ngamunye ubabonisa jikelele Hatamoto Color ukwelashwa okwengeziwe cryogenic ukuthi kwandisa ivumelana nezimo nekufana lwesakhiwo. Comfort lapho asebenta nalelicembu ithuluzi ihlinzeka ohlangothini bushelelezi ezingemuva isibambo, futhi ebusweni luyimbudumbudu kwangaphakathi isiza ukugcina ithuluzi ngisho ezimanzi noma namaslennoy isandla ezizoqeda ukulimala.
Japanese ummese Santoku (nomkhiqizi Gipfel) futhi bakwazi ukunciphisa futhi nquma futhi sidilike. kakhulu Igama ke in Japanese lisho ukuthi "izinhlobo ezintathu ukusetshenziswa." Ukusungulwa kuyinto ngesimo kude ku engxenyeni zokusebenza ikhaba kuvimbela ababambelela we tincetu umkhiqizo ngesikhathi ahlabayo. Leli thuluzi ubhekana lo uhlinza inyama, inhlanzi, amakhowe, imifino. Santoku - ke impela ezingabizi futhi ngesikhathi esifanayo imimese ukhululekile kakhulu futhi yesimanje jikelele (izithombe kungabonwa ezansi).
Esihle ekhishini ummese unamapharamitha ezithile kanye nezici, okumele uyinaka lapho ukhetha i-instrument. Ikhwalithi Imi incike impahla kuyiphi ikhaba. Kufanele kube insimbi engagqwali. On ubulukhuni futhi ukugqwala yayo ukumelana kuthonywa izithasiselo ehlukahlukene (chromium, molybdenum, i-silicon nokunye okunjalo. D.). Amapharamitha ezifana ubulukhuni futhi brittleness ka ikhaba kumelwe silinganiswe. Kubalulekile ukuthi ukudla uyisikhathi eside hhayi tupilos.
Uma ukhetha kufanele sinake ukungabi khona inclusions futhi streaks ku ikhaba (lokhu akusebenzi kuya steel eDamaseku).
Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe hilt. Ezenziwe ngokhuni, kuba ngakolunye uhlangothi, kulula ukuyisebenzisa, kodwa ngakolunye - hhayi eliwusizo kakhulu, okungukuthi, ukuba izinkuni akuyona impahla okuhlala kakhulu, futhi ukusetshenziswa isikhathi eside, kungase elasungulwa imifantu, okuzokwenza ngokuhamba kwesikhathi buthelela ukungcola ... Ngaphandle ukuxhumana njalo ngamanzi ukhuni kabi iphathwa iqala ukulahlekelwa ukuma.
izibambo Okuningi esisebenzayo high plastic. Nokho, abawubheki ngempela aesthetically elimnandi futhi ziyabukeka njalo.
Kodwa ummese okuhlala, isibambo is ezenziwe ngensimbi engagqwali. Isici esivelele sesimiso zomculo ezifana kuyinto isisindo eside uma eqhathaniswa nabanye.
Kukholakala ukuthi okungcono Umbuso ummese kumele kube abukhali, abe nesisindo ongaphakeme futhi isikhathi eside ukugcina ukugaywa. Lezi nemingcele zivumelana amathuluzi ngensingo we zobumba zirconia. ethile yabo kuphela - lenyuka fragility.
Ukuze uthenge ummese Umbuso wakufeza lokho okwakulindelwe, ukunakekelwa okufanele ikhokhwe ukuze ukugaya yakhe. Kungaba zamazwe amabili noma sohlangothi olulodwa. Inketho yokuqala ithandwa kakhulu, ikakhulukazi uma ummese Le yenzelwe ukusetshenziswa ekhaya.
Lokubaluleke kakhulu iyona isici ikhaba. Elidlula nge ubulukhuni kuze kufinyelele amayunithi 60 zidinga ukusetshenziswa grindstone diamond for amathuluzi imimese. Ukukhetha ummese isebenziseka ngezindlela eziningi, lokhu kufanele kucatshangelwe.
Ishidi panel, Noma kanjani Khetha Kahle?